EH-ST63 Beauty and Skin Care Products - Panasonic
အိုင်းယွန်းသုံး အသားအရေ သန့်စင်၊ ထိန်းညှိစက် EH-ST63
အိုင်းယွန်းသုံး စွမ်းအားသည် ဗီတာမင် စီကို အရေပြား အပေါ်ယံလွှာထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ရောက်ရှိသွားအောင် ထိုးသွင်းပေးသည်။
အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေစီးဆင်းမှုသည် အရေပြားအား အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဗီတာမင် စီကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ ရောက်ရှိစေပြီး အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးကာ တောက်ပနေစေပါသည်။
ပေါင်းစည်းထားသော အသားအရေ တောက်ပစေသည့် စနစ်
နေရောင်ခြည် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုများတွင် အသားအရေကို စောင့်ရှောက်ရန် အိုင်းယွန်းအသုံးပြုသော စွမ်းအားသည် ဗီတာမင် စီကို အရေပြား အပေါ်ယံလွှာထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ရောက်ရှိသွားအောင် ထိုးသွင်းပေးသည်။
ဗီတာမင် စီကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ နက်ရှိုင်းစွာ ရောက်ရှိစေသည်
ထိုးသွင်းသည့် ထိပ်ဦးပိုင်းမှ ထုတ်လွှတ်ပေးသော အမလျှပ်စီးနှင့် ဗီတာမင် စီမှ သယ်ဆောင်လာသော အဖိုဓာတ်တို့သည် တွန်းကန်အားကို ဖြစ်စေပြီး အရေပြား အပေါ်ယံလွှာကို ဖြတ်သန်းကာ အတွင်းထဲရှိ နက်ရှိုင်းစွာ ရောက်ရှိအောင် ဗီတာမင် စီကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဗီတာမင် စီ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် မျိုးတူပစ္စည်းများ များပါဝင်သော အသားအရေ စောင့်ရှောက်သည့် ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဤစက်ကို အသုံးပြုပါ*။
* လိုးရှင်း၊ mask၊ အရည်၊ ခရင်မ်၊ စသည်။
အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးသည့် ပစ္စည်းများကို အရေပြား အတွင်းထဲအထိ စိမ့်ဝင်စေပါသည်
ဝါဂွမ်းဖတ်ကို ထိပ်မှာတပ်ပြီး လိုးရှင်းအား စုပ်ယူသွားသည်အထိ စောင့်ပါ။ စက်၏ နောက်ပိုင်းရှိ အိုင်းယွန်းပြားပေါ်မှ အုပ်ပြီး စက်ကို ကိုင်ပါ။ ဝါဂွမ်းဖတ်ကို မျက်နှာနှင့် ဖိပြီး နူးညံ့စွာ ပွတ်ဆွဲပေးပါ။ အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေစီးဆင်းမှုသည် အရေပြားအား အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ ရောက်ရှိစေပါသည်။ EH-ST63 ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့် ပစ္စည်းများ၏ ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့်ပစ္စည်းများ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့မှုသည် လက်ဖြင့်လိမ်းခြင်းထက် 1.7 ဆ ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။*
* [စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း] စက် - EH-ST63 / အနေအထား - ရေဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် အနေအထား / အိုင်းယွန်းပမာဏ - မြင့်မားသော / အပူချိန် - လိုးရှင်း သုတ်လိမ်းထားသော များပြားသော/ဝါဂွမ်းစအား အသုံးပြုပြီး အရှေ့ဘက်ပုခုံးပေါ်တွင် တင်ထားပါသည်။ EH-ST63 အား အသုံးပြုချိန်တွင် ရရှိသော စိမ့်ဝင်မှုပမာဏသည် 23.6 μp/cm2 ဖြစ်ပြီး လက်ဖြင့် အသုံးပြုသောအခါရရှိသည်မှာ 13.9 μp/cm2 ဖြစ်ပါသည် (Panasonic စစ်တမ်းအရ)
အသားအရေ တင်းတင်းလေးဖြစ်နေစေရန် ပင့်တင်ပေးပြီး ပူနွေးသည့် နှိပ်နယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် သင်နှစ်သက်သော စည်းချက်ညီညီ တုန်ခါမှုကို ရွေးချယ်ပါ
အပူချိန်ဆက်တင်2ခုနှင့် တုန်ခါမှုဆက်တင်2ခုပါရှိပြီး သင် လိုသလို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားစေခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ရေစီးဆင်းမှုသည် အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းသည့် ပစ္စည်းများကို အရေပြားအတွင်းထဲထိ ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး နွေးနွေးလေးဖြင့် စည်းချက်ညီညီတုန်ခါနေသည့် ထိပ်ပိုင်းက အသားအရေကို ပင့်တင်ပေးပါသည်။
သာမန် မျက်နှာသန့်စင်ခြင်းဖြင့် လုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်သည့် အညစ်အကြေများကို စုပ်ယူပေးသည်။
အဖို/အမ လျှပ်စီးကြောင်းများကို တစ်လှည့်စီပြောင်းလဲခြင်းသည် အညစ်အကြေးများကို ထွက်လာစေပြီး ၎င်းတို့ကို ဝါဂွမ်းဆီသို့ရောက်ရှိစေရန်အတွက် အိုင်းယွန်းလှိုင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပေးသည်။
ဖြောင့်တန်းသောအချောင်းတွင် သတ္ထုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တြိဂံပုံစံထိပ်သည် အရေပြားအားဆွဲတင်ရန် လွယ်ကူစေပြီး နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်မှ နေရာများကဲ့သို့ အသေးစိတ်နေရာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။
1. ဖြောင့်တန်းသောအချောင်းသည် အရေပြားအားဆွဲတင်ရန် လွယ်ကူစေပါသည်
2. နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်မှနေရာများကဲ့သို့ အသေးစိတ်နေရာများအတွက်
3. ခုံးသောမျက်နှာပြင်သည် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှနေရာများအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပါသည်
ကြိုးမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အေးအေးဆေးဆေးနှင့် အခန်းထဲရှိနေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။
လိုချင်သော ဆက်တင်များကို ရွေးချယ်ပါ
သင့်အရေပြားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အိုင်းယွန်းပမာဏ၊ အပူချိန်နှင့် စည်းချက်ညီညီ တုန်ခါမှုများကို သင့်စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
အိုင်းယွန်းအသုံးပြု သန့်စင်ဆေးကြော၊ ကြည်လင်ချောမွတ်စေသည့်စက် EH-ST63 အား အသုံးပြုနည်း
1. ဝါဂွမ်းဖတ် တစ်ခု ထည့်ခြင်း
2. ဝါဂွမ်းစ တစ်ခုအား လိုးရှင်းထဲသို့ နှစ်ထားပါ
3. အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့် စနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ
5. ဝါဂွမ်းစကို အရေပြားပေါ်တွင် တင်လိုက်ပါ
သင်၏ နေ့စဉ်သုံး အသားအရေ စောင့်ရှောက်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဂွမ်းစများ (သို့မဟုတ် မျက်နှာကပ်ခွာ) ကို ပြင်ဆင်ထားပါ
*⁴ စနစ်များ- Cleansing/Moisturizing/Brighten/Warm Rhythm စနစ်များ
* Brighten မုဒ်တွင် ဗီတာမင်စီ ပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ/မျက်နှာကပ်ခွာများကို အသုံးပြုပါ။
တြိဂံပုံ ထိပ်ပိုင်းတွင် ဝါဂွမ်းစကို ထည့်သွင်းပြီး ချည်သားကွင်းဖြင့် ချည်နှောင်ပါ။
* Warm Rhythm စနစ်တွင် ဝါဂွမ်းစများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
* Brighten စနစ်တွင် ဝါဂွမ်းစများကို မသုံးဘဲ ဗီတာမင် စီပါဝင်သော ဆေးရည် သို့မဟုတ် ခရင်မ်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
* မျက်နှာ ကပ်ခွာအား အသုံးပြုပါက အဆင့်3မှ စတင်ပါ။
ဝါဂွမ်းစအား လိုးရှင်းကို အပြည့်အဝ စုပ်ယူပါစေ။
* ဝါဂွမ်းစကို လိုးရှင်းထဲ သေချာနှစ်၍ စုပ်ယူအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
SELECT ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် Cleanse စနစ်၊ Moisturize စနစ်၊ Brighten စနစ် သို့မဟုတ် Warm Rhythm စနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်၊ အိုင်းယွန်းအဆင့် (နိမ့်/အလယ်အလတ်/အမြင့််) ကိုထားပါ။
* Warm Rhythm စနစ်အတွက် သင် အသုံးပြုလိုသည့် တုန်ခါမှု စည်းချက်ကိုလည်း ရွေးချယ်ပါ။
TEMP ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက် အပူချိန် (နည်း/မြင့်/ပိတ်) ကို ရွေးချယ်ပါ။
Cleanse စနစ်၊ Moisturize စနစ်နှင့် Brighten စနစ်တွင် ဝါဂွမ်းစကို အကြိုနွေးအောင် လုပ်နေစဉ် စနစ်ညွှန်ပြမီးက မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းပြီး ယင်းသို့ နွေးအောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက် 1 မိနစ်ခန့်အကြာတွင် လုံးဝ မမှိတ်တော့ဘဲ ရှိနေပါမည်။
* အကြိုနွေးအောင်လုပ်နေစဉ် စက်ကို သုံးနိုင်ပါသည်။
စက်၏နောက်ပိုင်းရှိ အိုင်းယွန်းပြားပေါ်မှ အုပ်ပြီး စက်ကို ကိုင်ကာ နူးညံ့စွာ ပွတ်ဆွဲပါ။ မျက်နှာပြင်ကို အရေပြားနှင့် ထိပြီး ဘယ်ဘက်မှ ပုံတင်ပြထားသည့်အတိုင်း 1-6 သို့ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။